देशको स्वतन्त्र हैसियतका विरुद्ध कोही उभिन्छ भने एमालेलाई मञ्जुर हुँदैन « Loktantrapost
देशको स्वतन्त्र हैसियतका विरुद्ध कोही उभिन्छ भने एमालेलाई मञ्जुर हुँदैन
२३ फाल्गुन २०७३, सोमबार १२:३०
नेकपा एमालेद्वारा अगुवाई गरिएको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्न यस प्रस्थान विन्दुमा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीवहिनीहरु, सबै साथीहरु, सबैमा हार्दिक अभिभावन, नमस्कार !
कार्यक्रमका सभापति महोदय, मञ्चमा आसिन विशिष्ट अतिथि लगायत नेताज्यूहरु, माननीयज्यूहरु, अरु विभिन्न यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका साथीहरु, स्वयम्सेवक साथीहरु र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु !
आज हामी २१ फागुनका दिन, जुन दिनको नेपालको इतिहासमा एउटा विशेष महत्व छ, जुन देश जुन दिनमा हामीले एउटा इतिहासले नबिर्सने आन्दोलन बनाउनका लागि, यस दिनलाई एउटा दमनको प्रतीकको, हत्याको प्रतीकको, तानाशाही व्यवहार र आचरणको प्रतीकको रुपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा पाँच जना अग्रज साथीहरुको हत्या गरिएको थियो ।
त्यस दिनबाट हामी यो अभियान अगाडि बढाउँदैछौँ । यतिबेला म आजभन्दा ४४ वर्ष अगाडि निरङ्कुश राजतन्त्रको नेतृत्वमा पञ्चायती तानाशाहीले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजबंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु । त्यस आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु हुने सम्पूर्ण सहिदहरु, उहाँहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु ।
त्यसैगरी, देशका लागि, जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि ज्यान आहुती गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति पनि आज यस विशेष दिनमा, यस सहिद दिवसमा म श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।
आज ४४ वर्ष पछि पनि त्यसबेला, त्यस अगाडि र त्यस पछाडिका पनि विभिन्न सहिद परिवारहरु हाम्रो विचमा हुनुहुन्छ, हामीले सम्मान गरेका छौँ । म फेरि एकपल्ट सहिदका आदरणीय परिवाजन सबैमा म हार्दिक सहानुभूति, ऐक्यवद्धता र समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हामीले आजको दिनबाट प्रेरणा लिने छौँ, लिइरहेका छौँ । ४४ वर्ष अगाडि देशभर तानाशाहीले निरङ्कुश राजतन्त्रको मातहतमा अन्धकारमा राख्ने प्रयास गर्यो । त्यस प्रयास स्वरुप नै हत्याकाण्ड गरेका थिए । हत्याकाण्ड किन गर्नु परेको थियो भन्दा देशलाई अन्धकारमा राख्न, जनतालाई अगाडि बढ्न नदिन र जनतालाई तर्साउन र केही जनताका नेताको हत्या गरेर जनताको आन्दोलनलाई निष्तेज पार्नका लागि गरिएको थियो ।
आज हामी एउटा अभियानको सुरु गर्दैछौँ । यही ठाउँबाट एउटा अभियान सुरु गर्दैछौँ । यति विशाल उपस्थिति, यसले देखाउँछ आज आन्दोलन अत्यन्त सफलताका साथ सबल बनेको छ । र, पार्टी आजभन्दा ४४ वर्ष अगाडिको जुन आन्दोलन थियो त्यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन शिथिल भएका बेला, कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएका बेला, वैचारिक रुपमा स्पष्टता नभएका बेला, आन्दोलन आन्दोलनका रुपमा चल्न नसकिरहेका बेला, जनतामा के होला कसो होलाको एउटा निराशाको स्थिति, त्यस अवस्थामा यही ठाउँबाट यही जिल्लाबाट, यही नेपालमा पहिलोपल्ट घाम झुल्किने जिल्लाबाट, घाम उदाउने जिल्लाबाट एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु भएको थियो । जसले बामपन्थी आन्दोलनलाई जुझारु र सही विचारका साथ अगाडि लाने, त्यसै गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एउटा आत्मविश्वास जगाएर फेरि अगाडि बढाउने त्यस बाटोमा लिएर गएको छ ।
त्यो अभियान आज यस ठाउँमा आइपुगेको छ । र, नेकपा एमाले त्यस ठाउँबाट पुनर्गठित हुँदै, हामीसँग मञ्चमा नेताहरु हुनुहुन्छ विभिन्न आन्दोलनको पृष्ठभूमिका, झापा आन्दोलनले जुन अभियान सुरु गर्यो, जुन लहर सुरु गर्यो, जुन विचारको धार सुरु गर्यो, त्यो धारलाई अघि बढाउँदै, कमी कमजोरीहरु हटाउँदै, अझ त्यसलाई वैचारिक रुपले सबल बनाउँदै, साङ्गठनिक हिसावले सशक्त बनाउँदै देश अगाडि बढ्यो । आज नेकपा एमाले देशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँहरुलाई थाहा छ हरेक अफ्ठेरा अवस्थाहरुमा आज नेकपा एमाले सही ढङ्गले नेतृत्व गरिरहेको छ, दृढताका साथ नेतृत्व गरिरहेको छ, वैचारिक स्पष्टताका साथ नेतृत्व गरिरहेको छ ।
संविधान बनाउने बेला होस् नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको छ । यहाँहरु सबैलाई थाहा छ भन्ने मलाई विश्वास छ यदि नेकपा एमालेको दृढ अडान हुँदैनथ्यो भने, एमालेको स्पष्टता हुँदैनथ्यो भने, एमालेले अगुवाई गर्दैनथ्यो भने संविधान बन्न सक्ने थिएन । नेकपा एमालेले अगुवाई गरेको थियो ।
संविधान जारी भयो, अधिकारहरु हामीले जसका लागि सङ्घर्ष गर्यौँ, ती अधिकारहरु प्राप्त भएका छन् र संस्थागत गरिएका छन् । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ । संविधान जारी गर्न नदिने, संविधान बन्नै नदिने तत्वहरु छँदैथिए, तिनलाई पराजित गरेर संविधान जारी गरियो । अब कार्यान्वयन हुन नदिने त्यस प्रयासमा छ । आज मलाई लाग्छ सबैलाई थाहा छ, नेकपा एमाले दवाव नदिने हो भने, नेकपा एमालेले नभन्ने हो भने चुनावको मिति पनि घोषणा हुने थिएन । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा नेकपा एमालेको दवावमा भएको छ । अहिले पनि त्यो निर्वाचन हुन नदिने प्रयासहरु भएका छन् ।
तपाइँहरुले देख्नु भएको छ, निर्वाचन जस्तो कुरामा भाग नलिन, तपाइँहरुले देख्नु भएको छ १९ वर्षदेखि मुलुकमा निर्वाचन भएको छैन स्थानीय तहमा । १५ वर्षदेखि स्थानीय तह, स्थानीय निकायहरु हिजो रिक्त रहेका थिए । १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा, अबको स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकारको रुपमा त्यसले सम्पूर्ण विकेन्द्रीत अधिकारहरु, माथिका अधिकारहरु तल गाउँमा गएको छ । जनताका विचमा गएको छ । त्यो अत्यन्त आवश्यक छ । तर जनताका विचमा अधिकार जान नदिने प्रयासहरु भइरहेका छन् । यहाँहरुलाई थाहा छ जनताका विचमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ, तर वास्तविक अर्थमा सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन नदिने प्रयासहरु भइरहेका छन् । यहाँहरुलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ नेकपा एमाले यस देशको राजनीतिको अगुवाई गरिरहेको छ, नेकपा एमाले राजनीतिक आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा उमाले आर्थिक नीतिहरुको, आर्थिक अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ । सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, त्यस आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको छ ।
हाम्रो विविधतायुक्त देशमा सबैलाई थाहा छ नेकपा एमाले विभिन्न जातिहरुका विचमा, भौगोलिक विविधताका विचमा, कुनै प्रकारको वैमनस्यता होइन, एकताबद्ध भएर देश अगाडि जानु पर्छ भनेर राष्ट्रिय एकताको अभियान यसले चलाइरहेको छ ।
हाम्रो राष्ट्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्र हो र त्यस हैसियतमा रहनु पर्छ । हाम्रो राष्ट्रका हितहरु, भौगोलिक अखण्डतालाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन । यसको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । समृद्धितर्फको यात्रा, त्यसका निम्ति नेकपा एमालेले बाटो तय गरेको छ । कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ, त्यो कुरा नेकपा एमालेले देखाएको छ । अब हामी देखिरहेका छौँ यतिबेला, यस प्रक्रियालाई रोक्ने, अवरुद्ध गर्ने, प्रक्रिया अगाडि जान नदिने, संविधान कार्यान्वय हुन नदिने, चुनाव हुन नदिने, अराजकतामा देशलाई लाने, अस्थिरतामा देशलाई लाने, देशलाई उन्नति प्रगतिमा जान नदिने, कानूनको शासन हुन नदिने, त्यसप्रकारका प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
कहिँ भूगोलका नाउमा, कहिँ जातका नाउमा, जे नाउमा भए पनि लोकतन्त्रलाई बिथोल्न खोज्ने, लोकतन्त्र अगाडि बढ्न नदिने, त्यस्ता शक्तिहरु क्रियाशील छन् । यस अवस्थामा यसैकारण नेकपा एमालेले मेची महाकाली राष्टिय अभियान, यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति अभियान, यो लोकतन्त्रका निम्ति अभियान, यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अभियान, यो निर्वाचन गराउनका निम्ति अभियान, यहाँ हिंसा भड्काउन खोज्नेहरुलाई पराजित गरेर यस देशलाई बुद्धको देश, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिएको देशलाई शान्तिपूर्ण देशको रुपमा अगाडि बढाउनका लागि यो अभियान, हामी विभिन्न जाति भाषा, विभिन्न भेषभूषा, विभिन्न संस्कृति र धर्मका विविधताका विचमा छौँ । तर हामी एक छौँ । हामी नेपाली हौँ, मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँ भए पनि हामी नेपाली हौँ, हाम्रो नेपाल हो, हामी नेपाललाई सुन्दर बनाउँछौँ । सम्पन्न बनाउँछौँ । नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछौँ । त्यसका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, त्यसतर्फको यात्रा एउटा नयाँ अभियान, फेरि हामीले मेचीबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ, महाकालीसम्म पुर्याउँछौँ ।
लगभग १५ दिनको हाम्रो यात्रा छ । यस १५ दिनमा हामी हाम्रा पार्टीका विचारहरु, हाम्रा विचार भनेको देश बनाउने विचार, हामी कसैका कार्यक्रमहरु विथोल्ने भन्दैनौँ । हामी कसैका अधिकारहरु खोस्ने भन्दैनौँ । हामी सबैका अधिकारका लागि लडेका हौँ । हामी कसैका कुनै कार्यक्रममा व्यवधान खडा गर्ने भन्दैनौँ । कहिँ कोही पनि जान सक्छ, आफ्ना विचार भन्न सक्छ, ती कुराहरु हामीले भनेका छौँ । तर, त्यस नाउमा राष्ट्रियताका विरुद्धमा, भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा, देशको स्वतन्त्र हैसियतका विरुद्धमा, सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा, राष्ट्रलाई अपमानित गर्ने ढङ्गले स्वाभिमानका विरुद्धमा यदि कसैले कुनै गतिविधि गर्छ भने त्यो गतिविधि एमालेलाई मात्र मञ्जुर नहुने होइन, नेपाली जनतालाई मञ्जुर हुँदैन । तपाइँ हामीले भन्नु पर्छ यो हामीलाई मञ्जुर छैन । हामी नेपाललाई एकताबद्ध, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक देश बनाउन चाहन्छौँ । समृद्ध देश बनाउन चाहन्छौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो अभियान हो ।
हामी कसैका विचारमा रोक लगाउने, कसैलाई कार्यक्रम गर्न नदिने गर्दैनौँ । हामी अभियानलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले, सबै ठाउँमा हाम्रो अभियान शान्तिपूर्ण हुन्छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले तर निर्वाध । कसैले भने पनि, कसैले यसो गर्न दिन्न भने पनि, कसैको आदेश एमालेले मान्नु पर्ने छैन, जनताको आदेश मान्छ, जनताको बाहेक अरुको आदेश मान्दैन । एमालेले संविधान मान्छ, कानून मान्छ, गैरकानूनी कसैका फुर्ती एमालेले सुनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । त्यसकारण एमाले त्यता ध्यान दिदैन ।
एमाले संविधान अनुसार, कानून अनुसार देशको हितको पक्षमा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने अवसर दिलाउने पक्षमा, राष्ट्रिय एकता खल्बलिन नदिने, समृद्धिलाई सफलतामा पुर्याएरै छाड्ने, त्यो सङ्कल्पका साथ यस अभियानलाई अघि बढाउँदैछ । अहिले विभिन्न प्रकारका प्रयासहरु तपाइँहरुले सुन्नु भएको छ, असामयिक, असान्दर्भिक र हानिकारक, संविधान विपरीतको, देशको अहितमा हुने गरीको संविधान संशोधन बनाएर सरकारले ल्याएको छ । हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ, संविधान संशोधन यो देशको हितको विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, जनभावना विपरीत छ, नेपालको आवश्यकता विपरीत छ । त्यसकारण हामी त्यस संविधान संशोधनलाई पारित हुन दिदैनौँ । यो हामीले अलोकतान्त्रिक ढङ्गले भनेका छैनौँ, संसदीय अभ्यासभित्र, संसदभित्रको कुरा गरेका छौँ । तर यस्तो प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । जनमतले पनि, त्यसलाई संसदले पास गर्दैन । नैतिक हिसावले पनि त्यसलाई संसदले पास गर्न मिल्दैन ।
जे होस्, आज हामी यी भावनाका साथ एउटा राष्ट्रिय अभियान, एकताका लागि अभियान, नेपालीहरुका विचमा एकताका लागि अभियान, राष्ट्रिय एकताको अभियान, सामाजिक सद्भावको अभियान, लोकतन्त्र सुदृढीकरणको अभियान, निर्वाचन सफल बनाउने अभियान, यी अभियान अलिक अगाडिदेखि हामीले तय गरेर निश्चित गरेका छौँ । मलाई लाग्छ, अब मैले धेरै केही भनिरहनु भन्दा पनि यस पछि हामी यहाँबाट र्याली सुरु गरेर विर्तामोडमा जानेछौँ, विर्तामोडको कार्यक्रम सकेर फेरि दमकमा पनि कार्यक्रम गर्नेछौँ । आज हाम्रा अरु पनि कार्यक्रम हुने छन् ।
म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरुको पनि सहभागिता होस् । म स्वयम्सेवक साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रा स्वयम्सेवकहरु दृढ छन्, तर आवेश उत्तेजनामा आउँदैनन् । खासमा कामहरु अत्यन्त शान्त भावले गर्दछन् । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस महाअभियानमा सरिक होऔँ । यो अभियान, इतिहासमा यस प्रकारको पहिलो अभियान हो, यस प्रकारको अभियान नेपालमा कसैले सञ्चालन गरेको छैन ।
एमाले वाहेक अरुले यस्ता अभियानहरु सञ्चालन गर्ने आँट गर्न पनि सक्दैनन् । एमालेले मात्र सक्छ । यसकारण कि एमालेले अब देश बनाउने अभिभारा बोकेको छ । त्यो शालिनता, त्यो गम्भीरता, त्यसका साथ नेकपा एमाले यस राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ गर्न गइरहेको छ । अब म यस राष्ट्रिय अभियानको सुरुवातको घोषणा गर्न चाहन्छु । अभियान सुरु भएको छ । यस अभियानमा हामी अगाडि बढौँ । अब सबैलाई यो अभियानमा सरिक हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
(मेची–महाकाली अभियानको शुभारम्भ गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले काँकरभिट्टामा दिएको मन्तव्यमा आधारित)